मन्त्रालयको टोलीले कोरोना संक्रमित युवतीलाई मध्यरातमा पुर्‍याएको थियो अस्पताल – Ktm Dainik
मन्त्रालयको टोलीले कोरोना संक्रमित युवतीलाई मध्यरातमा पुर्‍याएको थियो अस्पताल - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
मन्त्रालयको टोलीले कोरोना संक्रमित युवतीलाई मध्यरातमा पुर्‍याएको थियो अस्पताल
काठमाडौं- सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले आकस्मिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरे। धेरैलाई नियमित पत्रकार सम्मेलन होला भन्ने लागेको थियो। तर, दृष्य यसअघिका पत्रकार सम्मेलन भन्दा फरक थियो। त्यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा जोस भेन्देलेयर थिए। त्यसपछि सबैलाई एउटै डर पसेको थियो– कुनै नेपालीमा कोरोना त देखिएन?
कोरोना रोकथाम र उपचारबारे जानकारी दिँदै गए स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटा। जब उनी आफ्नो वक्तव्यको अन्तिममा पुगे। त्यसपछि उनले प्रसंग जोड्दै भने- अन्त्यमा एउटा जानकारी छ। उपस्थितहरूको कान ठाडा भए। उनी भन्दै गए, ‘एक जना नेपाली युवतीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ।’
उपस्थितहरुका अनुहारमा एक्कासी डरको छायाँ देखियो। डा देवकोटाले केही विस्तृत जानकारी दिन खोज्दै भने, ‘फ्रान्सबाट कतारका दोहा हुँदै नेपाल आएकी एक युवतीमा कोरोना पोजिटिभ भेटियो।’
उनी कतार एयरवेजको जहाजबाट चैत ४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेकी थिइन्। उनका आफन्त उनलाई लिन विमास्थल पुगेका थिए।
कोरोना भाइरसको कुनै लक्षण नदेखिएकाले उनी होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकी थिइन्। यही क्रममा उनलाई खोकी र ज्वरोको लक्षण देखिन थाल्यो। त्यसपछि परिवारका सदस्यले निजी गाडीमा राखेर टेकु अस्पतालमा कोरोना परीक्षणका लागि लगेका थिए।
उनी परीक्षणका नमुना दिएर घर फर्किएकी थिइन्। कोरोना परीक्षण जाँचमा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खबर गर्‍यो।
परीक्षणमा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको खबर स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म द्रुत गतिमा फैलियो।
मन्त्रालयका प्रतिनिधि राती साढे १० बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको स्रोत बताउँछ। त्यहाँ छलफल भएपछि बिरामीलाई अस्पताल ल्याएर आइसोलेसनमा राखी उपचार गर्ने निर्णय भयो। यसबारे सर्वसाधारणलाई सोमबार मात्रै जानकारी दिने निर्णय भयो।
श्रेष्ठ थरकी ती महिलालाई लिन १२ बजे एम्बुलेन्स उनको घर पुगेको थियो। उनलाई राती नै अस्पताल ल्याइयो भने उनका परिवारका सदस्यलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको बताइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले ती महिलासँग सम्पर्कमा आएका सबै मानिसको १४ दिनसम्म कोरोना संक्रमण जाँच गर्ने बताए।
मन्त्रालयले उनी आएको कतार एवरवेजका कति यात्रु आएका थिए? उनीहरू कहाँ कहाँ गए? कहाँ छन्? भन्ने जानकारी लिइरहेको जानकारी दिएको छ।
त्यसबाहेक ती महिलाका सम्पर्कमा आएका परिवारका सदस्यबाहेक अन्य मानिसको खोजी पनि गरिरहेको बताइएको छ।
ती महिला मैतीदेवी क्षेत्र वरपरकी स्थायी बासिन्दा भएको पनि मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनी बस्ने स्थानबारे मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा बाहिर ल्याएको छैन। उक्त क्षेत्रलाई निगरानीमा राखिएको बुझिएको छ।
करिब दुई महिनापछि एक नेपालीलाई कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण देखिएको पुष्टि भएको हो।
पहिलो पटक माघ ८ गते चीनको वुहानबाट आएका एक नेपालीमा संक्रमण देखिएको थियो। उनी निको भएर घर फर्किसकेका छन्।
मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै ती महिलाको कोरोना संक्रमण देखिएको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाएको छ। आजसम्म प्रयोगशालाले ६ सय १२ नेपालीको कोरोना परीक्षण गरिसकेको छ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, चैत १० २०७६ १६:२२:४१